Ngathi - ALinks
Ulwazi olulungileyo lunokwenza amava akho abe mnandi kwaye ngamanye amaxesha kukuthintele ukungena engxakini enkulu.
Unxibelelwano lwelinye ilizwe yiwebhusayithi emalunga nokuhlala kwelinye ilizwe kunye nokuhamba wonke umntu. Yenziwa ngoJuni ka-2019 liqela lamavolontiya aphesheya asebenza nabafuduki nababaleki.
I-Abroad Links ifuna ukunika ulwazi oluthembekileyo nolucacileyo malunga nokuhlala kwelinye ilizwe ukuya kwelona nani liphezulu labantu kwihlabathi liphela. Sifuna ukwabelana ngamava abakhenkethi, abakhweli, abafundi bamazwe aphesheya, abagxothiweyo, abafuduki, iimbacu, kunye nabani na onomdla nje wokuhlala kwelinye ilizwe okanye indlela yokwamkela ilizwe labo ukwamkela abasemzini.
I-Abroad Links yenziwa kwaye ixhaswa yi-Asylum Links.
I-Asylum Links ngumanyano lwehlabathi lwabafuduki kunye nababaleki ababhaliswe e-UK, Umbutho waseNgilani kunye neWales Charitable Incorporate Organiser enenombolo yeCharity 1181234.
Buyela kwiphepha eliphambili
Afghanistani (13) uncedo (10) Alibhaniya (9) Ostreliya (18) Ostriya (14) iibhanki (37) Khanada (24) iTshayina (17) Dominikha (12) Fransi (16) Jemani (17) yibakhona (28) impilo (29) Hong Kong (12) iihotele (29) izindlu (14) Indiya (86) Irakh (15) ElamaTaliyane (24) imisebenzi (125) Maleyishiya (12) Mekhsikho (27) imali (71) Nayijeriya (12) Norowe (13) Phakistan (13) ababaleki (55) Rhashiya (16) ISaudi Arabia (9) isikolo (23) Speyin (19) isifundo (36) Swizalend (10) Thayilendi (13) izinto ukuthenga (106) izinto zokwenza (52) hamba (239) ikarikuni (29) UAE (14) Uganda (9) UK (59) i-USA (38) amakhonkco aluncedo (23) Venezuela (13) ivisa (152)